Ungazikopa njani iiFayile kuye okanye kwiFlash drive yakho Windows 10 Ikhompyuter
Ukuba ufuna iifayile zakho zigcinwe kwenye indawo ngaphandle kweyakho Windows 10 ikhompyuter yokugcina ngokukhuselekileyo, i-flash drive lukhetho olufanelekileyo. Landela la manyathelo alula ukuya ikopi yeefayile ukuya okanye ukusuka kwi-flash drive:
Faka i-flash drive kwenye yezibuko le-USB kwikhompyuter yakho.
IiLaptops, njengeekhamera, zihlala zine-slot yememori khadi. Ngaba ufuna ukuvula imemori khadi yakho kwi-flash drive? Thenga ngokulula isixhobo esibizwa ngokuba sisinxibelelanisi sekhadi sememori esizinikeleyo okanye esinye. Ukuthetha ngokungqongqo, umfundi wekhadi elinamacala amaninzi uyasebenza, kodwa abafundi be-multicard baxabisa ngaphezulu kwaye bahlala bebaninzi kunabafundi bekhadi elinye. Ukongeza, umfundi wekhadi lememori elizinikeleyo akayidingi intambo yokuqhagamshela ikhamera kwikhompyuter. Unokukhuphela imifanekiso yakho kwi-hard drive yakho ekhadini.
Ukuba Windows 10 ibonisa isaziso xa ufaka i-flash drive okanye imemori khadi, khetha iFolda evulekileyo ukujonga iiFayile, eziya kuvula iFayile Explorer kwidesktop. Ukuba iFayile yoMhloli ayivuli ngokuzenzekelayo, yiya kwidesktop kwaye ukhethe i icon yomfanekiso otyheli kwibar yomsebenzi ukuvula iFayile yoMhloli.
KwiFayile Explorer, hamba ngasekhohlo kwifolda eneefayile ofuna ukuzikopa. Khetha ifolda.
Kwicala lasekunene leFayile Explorer, khetha ifolda okanye ifayile ofuna ukuyikopa Ukuba ubona ibhokisi yokukhangela ngasekhohlo kwinto nganye ofuna ukuyikopa, unokukhetha ibhokisi nganye yokutshekisha ukukhuphela iifayile ezininzi ngaxeshanye.
Ukukhetha yonke into ekunene ngaxeshanye, sebenzisa i Khetha Zonke iqhosha kwi eKhaya thebhu. Unokukhetha kwakhona iifayile ongafuniyo ukuzikopa kwaye usebenzise i Buyisela ukhetho kwiqhosha lasekhaya ithebhu; iifayile ezikhethiweyo zikhethwe kwaye kungenjalo. Unokukhetha iifayile nangezinye iindlela.
Indlela emfutshane yebhodi yezitshixo yokukhetha zonke iifayile kwiFayile Explorer yiCtrl + A.
KwiRibhoni, khetha i eKhaya isithuba kwaye ukhethe i Khuphela kwiqhosha. Khetha Khetha Indawo kwimenyu ebonakalayo.
Ungazihambisa iifayile ukuba ufuna zimke kwindawo yazo yoqobo. Ukwenza njalo, khetha iqhosha eliHanjiswayo. Landela amanyathelo ashiyekileyo, kodwa endaweni yegama elithi Hambisa ikopi.
Kwi-Copy Izinto zefestile, phantsi kwesihloko se-PC, khangela i-flash drive okanye imemori khadi. Idrive ayiyi kuba yiDisk Disk (C :), apho kuhlala khona Windows 10. Khetha i-flash drive ekhutshwayo okanye imemori khadi apho ufuna ukukopa iifayile uze ukhethe iqhosha lokukopa. Ukuba iifayile zikopa ngokukhawuleza, ngekhe ubone nasiphi na isikhombisi senkqubela phambili; Ngaphandle koko, ibha yenkqubela phambili iboniswa de kube kugqityiwe ukukopa.
Ukuba ukhetha igama lakho lomsebenzisi kwibhokisi yencoko yencoko yababini, unokubona i-OneDrive edweliswe kuluhlu olwandisiweyo. Iifayile ozikopa kwi-OneDrive zikhutshelwa ngokuzenzekelayo kwilifu nakwiikhompyuter ezinxulumene nazo.
Ukuba ukopa ifayile esele ikwi-disk yendawo ekuyiwa kuyo, kuya kuvela indawo ethi Buyisela okanye yeka iiFayile. (Mhlawumbi ukopa ingxelo entsha yefayili obukope ngaphambili.) Qaphela iindlela ezikhoyo:
Guqula iFayile kwindawo esiya kuyo: Ukukhetha olu khetho kubuyisela enye ifayile kwenye. Qiniseka ukuba awuyifuni ifayile efakwe endaweni yayo (njengoko unokuba ufuna ukugcina iinguqulelo ezahlukeneyo zeefayile).
Tsiba Le Fayile: Ukukhetha olu khetho akwenzi nto ngale fayile.
Thelekisa ulwazi ngazo zombini ezi fayile: Ukukhetha olu khetho kuvula enye iwindow onokuthi ukhethe kuyo iifayile ngasekhohlo ukubuyisela ezingasekunene, kwaye ukhethe iifayile ekunene ukuzigcina. Ukukhetha ifayile enye ngasekhohlo nasekunene kudala ifayile yesibini enenombolo eyongezwe kwigama, njenge wam ifayile (2). Olu khetho lwenza ukuba ube nefayile yoqobo kunye nefayile entsha.
Khetha enye yeenketho zangaphambili. Ukuba ukhethe uthelekiso loLwazi kuzo zombini iiFayile, khetha iifayile oza kuzitshintsha okanye utsiba, kwaye ucofe iqhosha lokuqhubeka.
Qinisekisa ukuba ikopi isebenze ngokuhamba ngasekhohlo ukuya kwindawo oyikhethileyo njengendawo ekuyalelwa kuyo kwiNyathelo 6. ugqibile. Ukuba akunjalo, zama iNyathelo 4 ukuya ku-6 kwakhona.
Susa i-flash drive okanye imemori khadi oyifake kwiNyathelo 1. Ulungile ukuba uhambe.
Ukuba uneefayile okanye iifolda oza kuphazamiseka ukuba uzilahle, landela amanyathelo kulo msebenzi ukwenza iikopi zokulondolozwa kwezo zinto kwifowuni yokugcina ephathekayo. Emva koko gcina eso sixhobo kwindawo ekhuselekileyo.
Ukukopa iifayile kwi-flash drive okanye kwimemori khadi, landela la manyathelo afanayo kodwa ukhethe i-flash drive kwiNyathelo 3 kunye nefolda okanye kwenye indawo ofuna ukuyikopa okanye ukuhambisa iifayile kwiNyathelo 6.
Ukwahlula izixhobo ezisisiseko esinye
Ndingayithatha njani i-benadryl
phentermine 37.5 mg ngeSpanish
loluphi usuku lomthendeleko namhlanje
benadryl yedosi yabantwana yeminyaka emi-2 ubudala